iingxaki zomthengi. "
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemithetho yepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, uhlobo, ubungakanani kunye nobude bexesha obahluka ngalo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Ngamanye amaxesha amalungelo obunini bepropathi enobhaliso angabhaliswa ngaxeshanye. Law & MoreUbuchule kwicandelo lezomthetho wepropathi yengqondo kubandakanya ilungelo lokushicilela, umthetho wophawu lwentengiso, amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza kunye namagama orhwebo. Ukunxibelelana Law & More ungabuza malunga nezinto ezinokwenzeka.
Ilungelo lokushicilela likhusela imisebenzi yomenzi kwaye linika umenzi ilungelo lokushicilela, ukuvelisa nokukhusela umsebenzi wakhe ekusetyenzisweni gwenxa ngabantu besithathu. Igama 'umsebenzi' libandakanya iincwadi, iifilimu, umculo, ukupeyinta, iifoto kunye nemifanekiso eqingqiweyo. Nangona ilungelo lokushicilela lingafuneki ukufaka isicelo, njengoko lisenzeka ngokuzenzekelayo xa umsebenzi wenziwe, kuyacetyiswa ukuba ilungelo lokushicilela lirekhodwe. Ukuze umisele ilungelo, unokuhlala ungqina ukuba umsebenzi ubukhona ngomhla othile. Ngaba ungathanda ukubhalisa ilungelo lakho lobunini kunye nokukhusela umsebenzi wakho kubantu abaphula ilungelo lakho lokushicilela? Nceda unxibelelane nabameli apha Law & More.
Umthetho wophawu lwentengiso wenza ukuba kubhaliswe uphawu lwakho lwentengiso, ukuze kungabikho mntu unokusebenzisa igama lakho ngaphandle kwemvume yakho. Ilungelo lokuthengisa uphawu luqinisekiswa kuphela ukuba ubhalisa uphawu lwentengiso kwirejista yophawu lwentengiso. Law & More'Amagqwetha aya kukuvuyela ukukunceda ngale nto. Ukuba uphawu lwakho lwentengiso lubhalisiwe kwaye lwasetyenziswa ngaphandle kwemvume yakho, oku kukwaphula umthetho. Bakho Law & More igqwetha liya kuthi likwazi ukukunceda ukuba uthathe inyathelo ngokuchasene nabaphula umthetho.